Velaran-tany onenan’olona 30 tafo amin’izao fotoana izao no mampitaraina ireo mponina ao Antandrokomby Mahitsy fa mitady hisy haka.
Araka ny fampitam-baovao dia misy orinasa sinoa mikasa hametraka tetikasa sy hanala ireo mponina amin’ny fonenany ka dia manao antso avo ny fitondrana ireo mponina mba hijery akaiky ny zava-misy.
Mbola tohin’ny savorovoro mikasika ny fifidianana ho depiote ao amin’ny boriborintany faharoa hatrany dia fantatra ankehitriny fa karohina ihany koa ny kandida iray hafa izay niara-nanao fanadihadiana mikasika ireo hoso-pifidianana teny an-toerana niaraka tamin’ny kandidan’ny Za gasy ny alatsinainy teo. Kandida iray mahatsiaro voatohintohina amin’ny zava-misy moa no heno fa nametraka ny fitoriana.
Fanin’efany izao no voafidy ho mpilalao mendrika tamin’ireo lalao natrehany tao Etazonia na ny MLS ilay kintan’ny baolina kitra Malagasy, Romain Metanire. Vodilaharana moa no toerany ary anisan’ireo heverina ihany koa fa andrin’ny ekipam-pirenena na ny Barean’i Madagasikara izy any amin’ny CAN.